All New First Time Myanmar Artists LIVE In LONDON! | ရွှေမင်းသား
Home » သတင်း » All New First Time Myanmar Artists LIVE In LONDON!
All New First Time Myanmar Artists LIVE In LONDON!
BAMAR INNOVATIONS LTD မှ လန်ဒန်မြို့ တွင်ကျင်းပမည့် ရှိုးပွဲကြီးတွင် မြန်မာပြည် အဆိုတော်များဖြစ်ကြသော
အဲလက်စ်၊တင့်တင့်ထွန်း၊ရေဗက္ကာဝင်းJ-Me နှင့် မိုးဟေကိုတို့ သွားရောက်ဖျော်ဖြေကြမည်ဖြစ်သည်။အသေးစိတ်ကို
http://www.mlc09.com တွင် ကြည့်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။
Date: 11.07.09 (SATURDAY)
Venue: Greenford Hall
Tickets: £20 (Advanced) / £25 (On Doors)
မြန်မာ အစားအစာ များ
Lucky Draw အစီအစဉ်များ
1st Prize - Dinner with the Stars!
2nd Prize - £100 Bamar Talk Phone Card
3rd Prize - 1 Night For2ata4 Star Hotel
4th Prize - 10% OFF for6months at Shwe Mandalay
+ Many More Prizes!
မိမိနှစ်သက်ရာ အဆိုတော်များကို စင်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ပြီး အင်တာဗျူးနိုင်သည့်အစီအစဉ်များ
Dancers များ၏ အကများ ကိုခံစားနိုင်ပါသည်။
BAMAR INNOVATIONS LTD - http://www.bamartalk.com BAMAR TALK (Cheap Phone Cards to Myanmar) Shwe Mandalay Shwe Hinthar
Bamar Innovations Ltd - 02085690278
Shwe Mandalay - 07894227489
Shwe Hinthar - 07595172550
Eddie - 07727188260